गायक यम बरालको दो’स्रो विवाह, कसरी लिक भयो तस्वीर ? (हे’र्नुहोस भिडियो ) – Sadhaiko Khabar
गायक यम बरालको दो’स्रो विवाह, कसरी लिक भयो तस्वीर ? (हे’र्नुहोस भिडियो )
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष २९, २०७८ समय: ७:४८:५१
काठमाडौ / गायक याम बरालले सु’टुक्क दो’स्रो विवाह गरेको भन्दै भिडियो र तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । टेलिभिजन पत्रकार प्रकाश सुवेदीले संचालन गर्दै आएको कार्यक्रम बगिनामा यसवारे समाचार प्रशारण भएपछि उनले विवाह गरेको कुरा खु’लेको हो ।
यद्धपी गायक वरालले सो कुरा अस्वी’कार गरेको पनि सोही कार्यक्रममा बताइएको छ । प्रकास सुवेदीले याम बरालको दो’स्रो विवाह सम्ब’न्धी समाचार प्रशारण भएपछि आफुहरुलाई धेरै प्रश्न उठेको भन्दै त्यसवारे पनि जवाफ दिएका छन् ।
यसवारे याम वरालले ख’ण्डन गर्दै भिडियो सार्वजनिक गरेपछि प्रकासले आफुहरु प्र’माण विना नबो’ल्ने भन्दै थप पुष्टि सहितका सामग्री सहित भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । सो एपिसोडमा दोश्रो बिहे गरेका गायक याम बरालको बारेमा चर्चा गरिएको छ र उनीहरुले आफ्नो बिहेको ख’ण्डन गर्दै बिहेको भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् ।
कहिलेकाहीँ कलाकार र पत्रकारमा ठूलो भिन्नता हुन्छ । कहिलेकाहीँ पत्रकारले समयको बारेमा लेख्दा ठूलो भिन्नता हुन्छ। मानिसहरू आफ्नो बारेमा राम्रो समाचार लेख्न मन पराउँछन्। समयको बारेमा कुरा गर्दा एक अर्कालाई दुखी बनाउँछ। मान्छे बिचको स म्ब न्ध लाई सुमधुर बनाउन अब चा’प्लुसी गर्नु जरुरी छ ।
गीत संगीतको क्षेत्रमा पनि मानिसमा ठूलो भिन्नता रहेको पाइन्छ । मानिस भित्रको मानवता पनि लो’प हुँदै गएको छ । मान्छेले फरक फरक सोच्दा पनि एकअर्कालाई गा ली गर्ने काम हेरेर आफ्नो क्षेत्रलाई ब द नाम गर्न खोज्ने धेरै प्राणीहरु छन् । प्रकासले आफ्नो कार्यक्रममा याम वरालको विवाह मात्र भएको भनेका छैनन् उनले बरालकी दोस्री श्रीमती यिनी हुन् भन्दै तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेका छन् । उनले वरालको श्रीमतीका बारेमा धेरै कुरा खुलाएका छन् ।
उनले यसवारे दुवै जनासंग प्रतिकृया लिन खोज्दा दुवै जनाले विवाह अ’स्विकार गरेको पनि बताएका छन् । दुवै जनाले आफुहरुले विवाह गरेको कुरा नभ’नेको बताएका छन् । यद्धपी हामी प्र’माण विना बो’ल्दैनौं भन्दै उनले बरालको श्रीमतीको परिचय सहित तस्बिर सार्वजनिक गरेका हुन् । यस वारेमा गायक वरालको थप प्रतिकृया के आउँछ हेर्न बाँकी छ । – ईपब्लिक न्यु’ज बा’ट । हे’र्नुहोस् भिडियो :